Tacliinta - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Waxaa diirada lasaaray heer sare tacliinta
Waxaa naga go'an inaan qalin jabino ardayda diyaar u ah kuleejka, xirfadaha xirfadaha leh iyo xirfadaha. Waxaan sii wadnaa inaan helno arday loogu magac daray National Merit Finalists iyo Advanced Placement (AP) Aqoonyahanno si heer sare ah uga galey imtixaannada heerka kuleejka ah, iyadoo aan la xusin ardayda qaadata shaqada koorsada IB Diploma.
Dugsiyada sare waxay bixiyaan in kabadan 180 koorsooyin, 20 Advanced Placement (AP) fasalo iyo 75 waxqabad. Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay hoy u yihiin Barnaamijka oggolaanshaha buuxa ee K-12 International Baccalaureate (IB), barnaamij tacliimeed adag oo la aqoonsan yahay laguna dhaqmo adduunka oo dhan.
Dugsiga Hoose ee Lakeview wuxuu bixiyaa Barnaamijka Sannadka Aasaasiga ah ee IB (IB PYP)
Dugsiga Dhexe ee Robbinsdale wuxuu bixiyaa Barnaamijka Sannadaha Dhexe ee IB (IB MYP)
IB MYP wuxuu kusii socdaa Robbinsdale Cooper High School ardayda 9aad iyo 10aad ee Fasalka. Cooper sidoo kale waxay siisaa barnaamijka adag ee Dibloomada IB ardayda 11 iyo 12 Fasalka.
Dugsiga Sare ee Robbinsdale Armstrong wuxuu hoy u yahay barnaamijkeenna Meelaynta Horumarsan, oo ahaa mid ka mid ah dugsiyadii ugu horreeyay ee laga bixiyo fasallada AP.
Kobcinta iyo diirad saarida waxbarashada qaabdhismeedka wanaagsan
Waxbarashada farshaxanka ayaa xooga la saaray dhamaan heerarka fasalada. Waxaan ku faraxsanahay sumcaddeena barnaamijyada abaalmarinta ku guuleystay ee riwaayadaha, muusikada iyo farshaxanka. In kabadan 5,000 oo ardaydeena ah ayaa kaqeybqaata kooxda heesta, kooxda muusikada iyo muusikada. Ardayda muusikada ee degmadu waxay sanad walba ku qabtaan bandhig faneedka Orchestra Hall ee magaalada Minneapolis iyo meelo caan ah oo adduunka ah. Sannadkii 2020, waxaa naloo magacaabay mid ka mid ah 100ka Bulsho ee ugu Fiican Waxbarashada Muusikada Ameerika.